ရန်ကုန် | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း မှ | MyJobs
ရန်ကုန် ရှိ မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း မှ
Online Sales Admin Executive
Cashier M/F (1) Post
Operation Associate Male (1) Post
Import Assistant – Male (1) Post- Yangon
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ fdf
Sales Staff ( Car showroom) - Female ( 3) Post
Sales manager for Car Detailing Service Showroom
| အချိန်ပိုင်းအလုပ်အမျိုုးအစား |
Direct communicate with Boss - Planning yearly/ monthly sales target - Planning marketing activities - Manage sales team - Manage to achieve targets - Communicate with customer/ VIP customers - Visit to market and check competitors information - Try to improve sales always
Direct communicate with Boss - Planning yearly/ monthly sales target - Planning marketing ...
Assistant Regional Sales Manager(Tyre)(#mp)
A well known distribution company is currently hiring ARSM. This position is to enhance profitable sales target and sales strategy by understanding customers and key channels. Must have strong interpersonal skill and goal oriented.
A well known distribution company is currently hiring ARSM. This position is to enhance profita ...
မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။